कोरोनाले आधा नै घट्यो तीज म्युजिक भिडियो - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home Not-to-be-missed कोरोनाले आधा नै घट्यो तीज म्युजिक भिडियो
सुर्खेतकी दीपासा विसी अहिलेकी उम्दा मोडल हुन् । दिनमा तीन वटासम्म तीज भिडियोमा उनले मोडलिङ गरेको अनुभव छ । कोरोना संक्रमणका कारण यसपटक आफूहरूलाई ठूलो घाटा भएको यी अभिनेत्री एवं मोडलले बताएकी छन् । लोकदोहोरी मोडलहरूका आर्थिक हिसाबले तीज पर्व दसैंजस्तो हुने गर्दछ । तर, यसपटक तीज आफूहरूका लागि आर्थिक रूपले त्यति फाइदा हुन नसकेको दीपासाको कथन छ । अहिलेसम्म ६ सयभन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा मोडलिङ गरिसकेकी दीपाशाले आधा दर्जन चलचित्रमा नायिकाकी रूपमा काम गरिसकेकी छन् । तीज भिडियोमा मोडलिङबारे उनीसँग राजधानीका डब्बु क्षत्रीद्वारा गरिएको छोटो कुराकानी :
यसपालि तीज गीतको भिडियो कत्तिको काम पाइरहनु भएको छ ?
पोहोरको तुलनामा आधा पनि भिडियो यसपटक भएन । कोरोना संक्रमणका कारण धेरैले यो साल भिडियो नै बनाएनन् । तर, पनि त्यतिधेरै निराशै हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन ।
त्यसो भए आम्दानी कस्तो रह्यो त ?
आम्दानी त भो कुरै नगरौं । कोरोनाका कारण पोहोरभन्दा २५ प्रतिशत कम पारिश्रमिकमा यसपालि काम गर्नुपरेको छ ।
कति वटा तीज गीतको भिडियोमा यसपटक मोडलिङ गरियो त ?
यो एक आजसम्म १३ वटा भिडियोमा काम गरिसकेकी छु । अरू दुई वटा गीतको प्रस्ताव आएको छ । अब १५ दिनपछि तीज छ । यो सोमबार र मंगलबार एकएक वटा भिडियोमा अभिनय गरेपछि यसपालिको तीजको भिडियो सुटिङ सकिन्छ ।
गत वर्ष तीजमा कति वटा तीज भिडियो गर्नुभएको थियो ?
पोहोल ३५ वटा तीज गीतमा मोडलिङ गरेकी थिएँ । स्टेज कार्यक्रम पनि प्रशस्त थियो । यसपालि जम्मा १५ वटा तीज भिडियोमा काम गरियो । पोहोरको तुलनामा यसपालि आधा पनि काम भएन ।
यो पनि पढ्नुहोस पललाई हटाएर पुष्प राखियो रेड वाइनमा
तर यसपालि त तीज गीत त प्रशस्त रेकर्ड भएका छन् नि ?
हो, तीज गीत यसपालि प्रशस्त रेकर्ड भएको छ । तर, भिडियो आधा पनि बनेनन् । कोरोनाका कारण १५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने सरकारको निर्देशन रहेकाले तीज गीतको छायांकन सुरक्षाका कारण पनि कम भएको हो । अर्कोतर्फ आर्थिक संकटमा अहिले धेरै कलाकार छन् । सोही कारण गीत रेकर्ड गरेर पनि सुटिङ नगरी यसपालि धेरै लिरिकल भिडियो रिलिज भएको हो ।
यसपालि स्टेज कार्यक्रम त ठप्पजस्तै भयो हैन ?
हो, गत वर्ष मैले तीजमा एक दर्जनभन्दा बढी स्टेज कार्यक्रम गरेकी थिएँ । सोक्रममा करिब ६ लाख रुपैयाँ त मैले स्टेज कार्यक्रमबाटै तीजमा कमाएकी थिएँ । तर, यसपटक एउटा पनि स्टेज कार्यक्रम छैन । कोरोनाको कारण सरकारले मानिसहरू भेला भएर कार्यक्रम गर्न रोक लगाएको छ । जसका कारण एउटा पनि स्टेज कार्यक्रम यो वर्ष नभएको हो । तीजमा कमाएको खर्चले दसैंदेखि तिहारसम्म मनाउने गरिन्थ्यो । तिहारपछि बल्ल मेला महोत्सव सुरु हुने र हाम्रो आम्दानी हुने गर्दछ । तर, यसपटक अवस्था नाजुक छ । लोकदोहोरी क्षेत्रका अधिकांश कलाकारहरूको अहिले आम्दानी छैन ।
एजेन्सी - November 30, 2020
काठमाडाैं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले समाजमा रहेका अनियमिता र बेथितिलाई अन्त्य गर्न तथा पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि समन्वय एवं...
बिचार श्यामप्रसाद मैनाली - November 30, 2020
प्रमाणित हुने बित्तिकै नेपालीले काेराेना बिरुद्धकाे खोप पाउँछन् : मन्त्री ढकाल
प्रदेश राजधानी समाचारदाता - November 24, 2020
काठमाण्डाैं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप प्रमाणित भएर बजारमा आउने कित्तिकै नेपाली नागरिकले प्रयोग गर्न पाउने विश्वास दिलाएकाे छ...
भेन्टिलेटर र आईसीयूमा उपचाररत संक्रमित घटे
प्रदेश ३ प्रशान्त वली - November 29, 2020
काठमाडौं । कोरोना संक्रमण पुष्टि भइ भेन्टिलेटर र आईसीयूमा उपचाररत संक्रमित संख्या घट्दै गएको छ । गत मंगलबार ४ सय ५० संक्रमित आईसीयू र...
क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने कोरोना संक्रमित
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका स्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई कोरोना संक्रमण भएको छ । सन्दीपले सामाजिक संजालमा लेख्दै आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि गरेका...
‘सरकार ढल्दैन र देशलाई गलत बाटोमा जान दिइन्नँ’
Editor-Picks सुवास आचार्य - November 24, 2020
ताप्लेजुङ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई गलत बाटोमा जान नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले विभिन्न कदम चाल्न सक्ने अनावश्यक अड्कलबाजी भइरहेको समयमा...
Uncategorized राजधानी समाचारदाता - November 28, 2020
काठमाडौँ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट पछिल्लो २४ घण्टामा थप १८ जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार योसँगै नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट...
नेपाली वृत्तचित्र सहायक श्रीमान् रसियामा उत्कृष्ट
राजधानी समाचारदाता - August 31, 2020
काठमाडौं । रसियामा आयोजित १९औं अन्तर्राष्ट्रिय कान्स भिडियो फेस्टिबलमा नेपालको बहुपति प्रथाका बारेको वृत्तचित्र चलचित्र ‘सहायक श्रीमान्’ (को–हजबेन्ड)ले प्रथम पुरस्कार जितेको छ । यसअघि...
पृथ्वी गोलो नभएको प्रमाणित गर्न अन्तरिक्ष जान खोज्दा मृत्यु
क्यालिफोर्निया । अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाको मरुभूमिमा आफैंले बनाएको रकेटमा अन्तरिक्ष जान खोजेका एक अमेरिकीको मृत्यु भएको छ । पागल उपनाम राखेका ६४ वर्षीय...
बिचार कुमार बन्धु रूपाखेती - August 6, 2020
अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक छैन : सर्वोच्च
राजनीति राजधानी समाचारदाता - July 27, 2020
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेतृ सरिता गिरीको सांसद पद खारेज हुने गरी उनको पार्टीले गरेको निर्णयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नरहेको आदेश गरेको...
कला राजन घिमिरे - October 15, 2020
Breaking News दीपक ओली - April 4, 2020
गण्डकीमा ११ जना कोरोना संक्रमित थपिए
प्रदेश ४ रासस - September 8, 2020
गण्डकी । गण्डकी प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई हजार ६१२ पुगेको छ । आज थप ११ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य...
वर्तमान सरकार देशकै लागि घातक : नेता भण्डारी
प्रदेश २ सुजीतकुमार झा - November 29, 2020
जनकपुरधाम । जनता समाजवादी पार्टीका नेता शरतसिंह भण्डारीले उतर केहि नदेख्ने तर दक्षिणको कुरालाई राष्ट्रवादको मुद्दा बनाउने वर्तमान संघिय सरकार देशकै लागि घातक रहेको...
प्रदेश २ एम के माझी - November 26, 2020
सप्तरी । कोशीले पु-याएको क्षतिको र मुआब्जा र क्षतिपूर्ति तीन पुस्तादेखी माग्दै आएपनि हालसम्म नपाएको भन्दै सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीका कोशी पीडितहरुको तर्फबाट संयुक्त...
काठमाडौँ । पश्चिमी वायुको प्रभावले आज देशका अधिकाश स्थानमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपात हुने भएको...
यो पनि पढ्नुहोस देशप्रेमको गीत लिएर आइन् सुजाता
सुभाष साह - November 29, 2020
महेश्वर गौतम - November 24, 2020
नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीद्वारा प्रतिवेदन पेश
ईश्वर तामाङ - November 28, 2020
प्रधानमन्त्रीको माला हिक्मत कार्कीलाई लगाएर चित्त बुझाए
भगीरथ भण्डारी - November 24, 2020
यो पनि पढ्नुहोस मेलिनाको गीतमा आँचलको अभिनय